गाउँका युवतीहरू १५ किलोमिटर हिँडेर स्कूल जान्थे , सोनूले सुद ले पूरै गाउँका लागि पठाए साइकल ! – AB Sansar
गाउँका युवतीहरू १५ किलोमिटर हिँडेर स्कूल जान्थे , सोनूले सुद ले पूरै गाउँका लागि पठाए साइकल !
November 3, 2020 adminLeaveaComment on गाउँका युवतीहरू १५ किलोमिटर हिँडेर स्कूल जान्थे , सोनूले सुद ले पूरै गाउँका लागि पठाए साइकल !
एजेन्सी। लकडाउनको समयमा गरिबका लागि भगवान् बनेर उभिएका बलिउड अभिनेता सोनू सूदले आफ्नो सहयोगलाई निरन्तरता दिइरहेका छन्। गरीब तथा मजदूरलाई लकडाउनको समयमा घरसम्म पुर्‍याएका उनी यतिबेला मानिसहरूको घरघर पुग्न थालेका छन्। उनीप्रति मानिसहरूको आशा पनि जाग्न थालेको छ। हुन पनि उनले हरेक समस्यामा परेका मानिसहरूलाई सहयोग गर्दै आएका छन्। एक व्यक्तिले सोनूलाई नै ट्याग गरेर ट्वीटरमार्फत् सहयोग मागेका थिए। एक ट्वीटर प्रयोगकर्ता सोनूलाई मेन्सन गरेको ट्वीटको आधारमा उनले सहयोग गरेका हुन्। **** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला****
उनले पूरै गाउँका लागि साइकल सहयोग गरेका हुन्। उत्तर प्रदेशको मिर्जापुर तथा सोनभद्र जिल्लामा युवतीहरू १५ किलोमिटर हिँडेर स्कूल पढ्न जान्छन्। कक्षा ५ सम्म पढ्ने र त्यसपछि स्कूल नै छाड्ने गरेका छन्। यस कुराको जानकारी ती ट्वीटर प्रयोगकर्ताले सोनूलाई मेन्सन गरेका थिए। सन्तोष चौहान नाम गरेका व्यक्तिले लेखेका थिए, “सोनू सूदजी, गाउँमा ३५ किशोरी छन्। जो पढ्नका लागि ८ देखि १५ किलोमिटर जंगलको बाटो हिँडेर जानुपर्छ। केवल केहीसँग मात्र साइकल छ। यो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हो।
डरका कारण परिवारले उनीहरू कक्षा ५ भन्दा बढी पढ्न दिँदैनन्। यदि तपाईँले यी सबैलाई साइकल दिनसक्नुहुन्छ भने यिनीहरूको भविष्य सुध्रिन सक्छ।” सन्तोषको यो मागमा सोनूको ध्यान गयो र उनले साइकल उपलब्ध गराउने आश्वासन दिलाए। सोनूले ट्वीटको जवाफमा लेखे, “गाउँका हरेक किशोरीसँग साइकल हुन्छ र सबै किशोरी स्कूल पढ्छन्। परिवारवालाहरूसँग भनिदिनुहोला कि साइलक आउँदै छ। केवल चिया बनाएर राख्नुहोला।”**** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला****
BREAKING: सवारी साधन मा भाडादर टाँसेको नभए ट्राफिक प्रहरीले यस्तो कडा कारबाही गर्ने !
Breaking : कोरोनालाई लिएर WHO ले आज बल्ल दियो यस्तो खबर ! छायो विश्वभर खुसियाली !
देशमा कोरोना फेरि भयावह बनेको भन्दै बिहीवार देखि १ महिना पुरै लकडाउन गर्ने सरकारको निर्णय
कोरोना खोपमा सफलता मिलेको केही दिनमै फेरि WHO ले दियो यस्तो ड’रलाग्दो खबर ! विश्वभर त्रा:स ।
अहिले यस्ती भईन अनिता आफै हिड्डुल गर्न र खान सक्छिन , भगवान जस्ता श्रीमानको माया पाएर कसैले पनि नसोचेको चमत्कार भयो अनिता जिबनमा- हेर्नुहोस पुरा भिडियोमा June 22, 2021